ဘဝမှတ်တိုင်: Google Play Store မပါတဲ့ China Android ဖုန်းတွေကို Play Store ထည့်သွင်းနည်း
Google Play Store မပါတဲ့ China Android ဖုန်းတွေကို Play Store ထည့်သွင်းနည်း
Root မဖြစ်သေးရင် ဒီထဲကအတိုင်း Root လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်..။
Root လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်... ဒီအတိုင်းပြုပြင်ပေးလိုက်ပါ....
၁ ။ Root Explorer Apk V.3.1.2 ကို ဒေါင်းယူပြီး ဖုန်းထဲကို Install လုပ်ထားပါ ...
၂ ။ လိုအပ်တဲ့ ဖိုလ်တွေကို ထပ်ဒေါင်းယူပါ..။ 1) GoogleServicesFramework
3) (lastest version is better) (or) Google play store
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/26/2013 03:32:00 pm
TPS Trading 23 March 2016 at 14:54
aungzawp naing 18 October 2016 at 03:30
အစ်ကိုရေ ကူညီပေးပါဦး ခင်ဗျာ. huawei g610 u00 ကို firmware ပြန်ရေးလိုက်တော့ google play store. play service .gmail apk တစ်ခုမှ ဖွင့်မရတော့ဘူးဗျာ
root လဲ ဖောက်ပီးသား ပါ။ လုပ်ရမယ့် နည်းလမ်းလေးနဲ့ လိုအပ်မယ့် tool link တွေကို တင်ပြပေးပါဦး ...